क’ट्टु सानो सिलाइदिएको भन्दै पुलिसमा उ’जुरी गरेपछी, यस्तो सम्म भयो ! – Life Nepali
क’ट्टु सानो सिलाइदिएको भन्दै पुलिसमा उ’जुरी गरेपछी, यस्तो सम्म भयो !
काठमाडौं । पसलेले ख’राब सामान दिएको र त्यस्तो सामान फिर्ता लिन नमानेको जस्ता गु’नासाहरु ग्राहकहरुले गर्ने गर्दछन् । तर क’ट्टु सानो सिलाइदिएको भन्दै सूचिकारविरु’द्ध पुलिसमा उ’जुरी दिएको चाहिँ अहिलेसम्म सुनिएको थिएन । छिमेकी मुलुक भारतमा हालै एकजना व्यक्तिले आफ्नो क’ट्टु आवश्यकताभन्दा सानो सिलाइदिएको भन्दै क’ट्टु सिलाउने व्यक्तिवि’रुद्ध उजुरी दिएसँगै अब सुन्न बाँकी केही रहेन ।
भारतको भोपालस्थित हबिबगञ्जको घ’टना हो यो । कृष्ण कुमार दुबे नामका ती व्यक्तिले एकजना छिमेकी सूचिकारलाई दुई मिटर कपडा दिँदै आफ्नो लागि क’ट्टु सिलाइदिन लगाए । सूचिकारले कृष्णकुमारका लागि क’ट्टु त सिलाइदिए तर क’ट्टुको साइज कृष्णलाई सानो भयो । क’ट्टु सानो भएको भन्दै त्यसको धागो उधारेर केही खु’कुलो बनाइदिन उनले सूचिकारसँग आग्रह गरे । तर सूचिकारले उनको आग्रह अस्विकार गरे ।
दुई मिटर कपडा दिँदासमेत आफूलाई अट्ने क’ट्टु नसिलाइदिएको झोँकमा कृष्णले ती सूचिकारवि’रुद्ध प्रहरीमा उजुरी हाले । प्रहरीमा दिएको लिखित उजुरीमा उनले सूचिकारवि’रुद्ध कानूनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् । त्यो अ’नौठो उ’जुरी देखेर पुलिस पनि छ’क्क पर्यो । एकछिनको विचार विमर्शपछि पुलिसले त्यस्तो उ’जुरी दर्ता गर्न नसकिने भन्दै सूचिकारबाट क्षतिपूर्ति चाहिएमा अदालतमा मु’द्दा हाल्नका लागि कृष्णकुमारलाई सल्लाह दिएको बताइएको छ । प्रहरीको त्यस्तो सल्लाहपछि ती व्यक्ति सूचिकारविरु’द्ध अदालतमा गए वा गएनन् भन्नेचाहिँ खुलेको छैन ।
Previous टेलिभिजनमा लाइभमा समाचार प’ढ्दा प’ढ्दै महिला एं’करको दाँ’त ख’स्यो, त्यसपछि के भ’यो ? (भिडियो)
Next १४ वर्षकी कि’शोरीलाई च्याटबाट फ’साएर, यौ’न स’म्बन्धका लागि भेट्न बोलाए तर अन्तिममा यस्तो भयो –